स्वास्थ्य Archives - SAMACHAR SANJAL
यी स्वस्थ्यकर खानेकुरा, यसरी खाइयो भने विष समान हुन्छ
धेरै खायो भने चिनी पनि तीतो हुन्छ, औषधी पनि बिष हुन्छ ।’ नेपाली समाजमा भनाई नै छ । धेरै खानेकुरा स्वास्थ्यवर्द्धक हुन्छ । गेडागुडी, सागपात, ड्रइफ्रुट्स, माछामासु स्वस्थ्यकर नै हुन्छ । यद्यपी यी खानेकुराहरु सहि मात्रामा सेवन गर्नुपर्छ । खानपानमा तालमेल मिलेन भने स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । भनिन्छ, खानेकुरा त्यती नै खानुपर्छ, जति हामीलाई आवश्यक हुन्छ । केही खानेकुरा यस्तो हुन्छ, जसको बारेमा हामीले सानैदेखि जान्दै आएका छौ । तर, धेरैलाई थाहा छैन यी खानेकुरा स्वस्थ्यकर त हुन्छ, तर थोरै खाएको अवस्थामा मात्र । यदि यी खानेकुरा धेरै मात्रामा…
टिप्स मुटुका लागि चुरोटभन्दा खतरनाक हुनसक्छ अगरबत्तीको धुँवाँ
स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेत व्यक्तिहरु चुरोट सेवन गर्दैनन् । किनभने, चुरोटको धुँवाँ शरीरको लागि घातक छ । तर, त्यही व्यक्ति पूजापाठ गर्दा वा मन्दिर धाउँदा अगरबत्तीको धुँवाँमा बस्छ । अगरबत्ती बाल्नु धार्मिक आस्थासँग जोडिएको छ । अगरबत्ती सुगन्धित हुन्छ । हामीलाई यस्तो सुगन्ध मन पनि पर्छ । कतिपय अवस्थामा दुर्घन्धको प्रभाव कम गर्न पनि अगरबत्ती बालिन्छ । तर, यस्तो असर अगरबत्ती बाल्नु सामान्य लाग्छ हामीलाई । अझ त्यसको असरबारे हामीले सायदै सोचेका छौं । जबकी यो निकै घातक हुन्छ, स्वास्थ्यका लागि । अध्ययनहरुले के भन्छ भने, अगरबत्ती चुरोटको धुँवाँ भन्दा खतरनाक…
क्यान्सरबाट बच्न काउलीले सहयोग गर्ने !
काउली खानु क्यान्सरबाट बच्ने एउटा उत्तम उपाय हो । काउली खानाले क्यान्सरका कोषहरू बनेका छन् भने पनि त्यसलाई बृद्धि हुन नदिई त्यहीँ निष्क्रिय पार्छ । यसमा पाइने ‘ग्लुकोसिनोलेट’ र ‘सल्फोराफेन’ले क्यान्सर लाग्न सक्ने तन्तुहरूलाई हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । काउलीले फोक्सो, स्तन, आन्द्रा, डिम्वाशय र मुत्रथैलीको क्यान्सरबाट बचाउन पनि मद्दत गर्दछ । फ्रेड हचिन्सन क्यासर रिसर्च सेन्टरमा भएको अध्ययनले काउलीजस्ता हरियो सागपातको दैनिक प्रयोगले प्रोस्टेट क्यान्सर हुने सम्भावना लगभग आधा घटाउँछ । अध्ययन अनुसार काउलीमा ‘इन्डोल–३–कार्विनोल’ र योभन्दा सशक्त ‘डाइ–इन्डोमिथेन’ नामक रसायनहरू हुन्छन् जसले क्यान्सरसँग लड्न र क्यान्सरका कोषको वृद्धि…
एजेन्सी । मन्दिरमा धेरै चडाइने वस्तुहरु मध्येमा सबैभन्दा बढी नरिवल प्रयोग गरिन्छ। नरिवललाइ संस्कृतमा नारिकेल भनिन्छ। श्रीफला पनि भनिन्छ नरिवललाइ जसको अर्थ हुन्छ ‘शुभ फउत्पति कसरी भयो ? वैदिक कथाहरुमा यसको उत्पतिको बारेमा राम्रोसंग उल्लेख गरेको पाइदैन। तर पुराण अनि महाकाव्यहरुमा भने यसको बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। यो फल इन्डोनेशियामा पाइन्थ्यो अनि पहिलो शताब्दी पछिको समयमा उत्तरी एशियातिर भित्र्याइएको जनाइन्छ। कहिले प्रयोग गरिन्छ ? नरिवललाइ धेरै जस्तो शुभकार्यको अगाडी प्रयोग गरिन्छ। तोरण झै घरको ढोकामा कुनै शुभकार्य पुर्व नरिवल फोडिन्छ। नरिवललाइ उर्वरताको प्रतिक मानिन्छ। त्यसैले धार्मिक विश्वास अनुसार, यदि कोही…
नपत्याउने रोगहरु निको हुन्छन् तुलसीको प्रयोगले गर्दा !!!-हेर्नुहोस —
February 11, 2018 February 11, 2018 admin>
तुलसीको सफा पातलाई पिँधेर प्राप्त हुने रस (५–१० मिलिलिटर)मा मह मिसाएर दिनको दुईदेखि तीनपटक सेवन गर्दा सर्दी, खोकी, रुघा, निमोनिया, दम आदिमा प्रभावकारी हुन्छ । बच्चाको साधारण पेट दुख्दा, अजीर्ण हुँदा, अरुचि हुँदा तुलसीको पातको रस र अदुवाको रस मिसाएर दिँदा फाइदा हुन्छ । मधुमेह तथा पिसाबसम्बन्धी रोगमा तुलसीको बीजलाई पिँधेर तयार गरिएको लेदोलाई १–३ ग्रामसम्म दिनमा दुईपटक सेवन गर्दा पनि फाइदा गर्छ । विषम ज्वरो वा अन्य रुघाखोकीमा तुलसीको पात चपाएर सेवन गर्दा फाइदा हुन्छ । केही रोग नभएको अवस्थामा पनि तुलसीको ३–४ वटा पात चपाएर दिनमा २–३ पटकसम्म…
यी हुन् पिसाब रोक्दा हुने ७ समस्या
February 10, 2018 admin>
पिसाब शरीरको सामान्य प्रक्रिया हो । पसिनाजस्तै पिसाबका माध्यमबाट पनि शरीरका लागि अनावश्यक तत्वहरु बाहिर निस्कन्छन् । जसलाई महसुस भएको एकदेखि दुई मिनेटभित्र फ्याँक्नुपर्छ । पिसाब थैली भरिनेबित्तिकै स्नायुप्रणालीले त्यसको संकेत मष्तिष्कमा पु¥याउँछ र पिसाब फेर्न मन लाग्छ । यदि पिसाब थोरै समय पनि रोकियो भने संक्रमण सुरुवात हुन्छ । पिसाब रोक्दा कस्ता समस्या निम्तन्छन् त ? आउनुहोस् थाहा पाउनुहोस् : १. मानिसहरु पिसाब केही मिनेटका लागि या लामो समयसम्म रोकेर राख्छन् । तपाईं पिसाब कतिबेर राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा पिसाबको उत्पादनमा भर पर्छ । यसका अलावा तरल पदार्थको उपभोग या…
ग्यास्ट्रिकका उपचार अब आफैँ गर्न सकिने…
ग्यास्ट्रिक भन्ने गरिन्छ । ग्यास्ट्रिक भएकाहरुलाई वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने, ढ्याउ ढ्याउ आउनु, वान्तामा रगत देखिने, कालो दिसा आउने, खाना नपच्ने, तौल कम हुने ,छाती र पेटको बीचको खाल्टो वरिपरि दुख्ने, पेट पोल्नु, भोक हराउनु, अम्लपित बढ्नु, मुख बिग्रिनु, पेट भारी हुनु, आपन वायु बढ्ने आदि लक्षण देखा पर्नु नै यसको लक्षण हो । यसबाट बच्ने घरेलु उपायहरू धेरै छन् ती मध्ये केही यहाँ भनिएको छ बेसारको पात बेसारको पातलाई सबैभन्दा राम्रो ग्यास्ट्रिकको औषधिको रुपमा मानिन्छ । दिनको एक ग्लास दुधमा चप गरेको बेसारको पात मिसाउनु र दिनहुँ पिउनुहोस् ।…
January 21, 2018 admin>
१. पाचन सुधार्छ पाचनलाई सुधार्नका लागि बिहान तातो पानीमा मह र कागती मिसाएर खानुपर्छ । यसले पेट सफा राख्न मद्दत गर्नुका साथै कलेजोमा रसको उत्पादनलाई बढाउँछ, जसबाट पाचन प्रक्रियामा मद्दत मिल्छ । कागतीमा रहेको एसिडले पाचनप्रणालीलाई मजबूत पार्न मद्दत गर्छ र अवान्छित विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्छ । यसका अलावा महले एक एन्टीब्याक्टेरियलको रुपमा काम गर्छ र शरीरमा रहेको कुनै पनि प्रकारको संक्रमण हटाउँन मद्दत गर्छ । २. कब्जियत हटाउँछ तातोपानीमा मह र कागती मिसाएर खानाले कब्जियतलाई समेत निको पार्ट । यसले आँतलाई प्रोत्साहित गरेर दिसा खलास गर्नमा सहयोग गर्छ ।…
सुर्खेत– जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मुगुको तथ्यांक अनुसार जिल्लाका ६१ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित छन्। यो तीन महिनाभन्दा माथि र पाँच वर्षभन्दा तलको उमेर समूहका बालबालिकाको तथ्यांक मात्रै हो। यस्तै कालिकोटमा ६३ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणले ग्रसित भएको तथ्यांक जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कालिकोटसँग छ। त्यसैगरी हुम्लाका ३२ प्रतिशत, डोल्पाका ११ प्रतिशत र जुम्लाका ९ प्रतिशत बालबालिका कुपोषण ग्रस्त छन्। उल्लिखित तथ्यांकले कर्णालीका बालबालिकाले भोगिरहेको कुपोषणको कहर प्रस्ट देखाउँछ। कर्णालीमा कुपोषण कति भयावह अवस्थामा पुगेको छ भने यही आर्थिक वर्षमा कालिकोटमा तीन जना बालबालिकालले कुपोषणकै कारण ज्यान गुमाए। पोषणयुक्त खानाको अभावमा कुपोषणमा परेका ती…
कम सुत्ने मानिस मानसिक समस्याको खतरामा : अध्यन
January 7, 2018 January 7, 2018 admin>
दैनिक आठ घण्टाभन्दा कम सुत्ने मानिसमध्ये धेरैमा मानसिक तनाव एवम् निराशा (डिप्रेसन)को समस्या देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको विघम्टन विश्वविद्यालयलले हालै गरेको एक अध्ययनले दैनिक आठ घण्टाभन्दा कम सुत्ने मानिसलाई मानसिक तनाव एवम् निराशा (डिप्रेसन)को समस्या देखिने तथ्य पत्ता लागेको जनाएको थियो । सुत्ने समयावधि र मानसिक अवस्थाबीचको सम्बन्धको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा कम सुत्नेमा बढी मानसिक समस्या र चिन्ता देखिएको सो अध्ययनमा पत्ता लागेको हो । विश्वविद्यालयले अध्ययनपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बढी सुत्ने मानिसमा भन्दा कम सुत्ने मानिसमा बढी नकारात्मक सोचाई पाइएको पनि उल्लेख गरेको छ…